एकाबिहानै हलेसी महादेवको दर्शन गरी जान्नुहोस मंसिर २५ गते बुधबारको राशिफल – ramechhapkhabar.com
एकाबिहानै हलेसी महादेवको दर्शन गरी जान्नुहोस मंसिर २५ गते बुधबारको राशिफल
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर २५ गते बुधबारको राशिफल । इ.स. २०१९ डिसेम्बर ११, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष । चतुर्दशी, १०:५४ उप्रान्त पूर्णिमा ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। बोलीको माध्यमले धेरैलाई प्रभा’वित पार्न सकिनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा समेत मनग्गे फाइदा हुनेछ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) पहिलेका कम’जोरी सु’धार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। बि’छोडिएका परिवारजनसँग भेटघा’ट हुनेछ। रमाइलो जमघ’टका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अव’सर प्राप्त हुनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। आ’कस्मिक ख’र्चले अर्थ अ’भाव देखापर्न सक्छ। समय दिन नसक्दा काम बिग्र’न सक्छ। पछिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। पहिले आक्षेप लगाउनेहरूले समेत समर्थन गर्न थाल्नेछन्। विदेश ता’क्नेहरूलाई यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। टाढिएका शुभचिन्तकहरू नजिकिन सक्छन्।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) परिश्रमको फल प्राप्त हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने मौका छ। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् र दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ। व्यापार तथा सा’झेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ। आम्दानी बढ्नेछ भने परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन्। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) वि’शेष अ’वसर प्राप्त हुनुका साथै नाम, दाम र इनाम हातलागी हुने समय छ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। पछिसम्मका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौ’का छ। कामको सन्दर्भमा वि’शिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। नोकरी तथा व्यवसायमा वि’शेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) मिहिनेतले जिम्मे’वारी दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। रो’किएका काम सम्पादन हुनेछन्। वि’शेष जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ गर्न सक्छ। भेटघा’टले महत्त्वपूर्ण कामको जग बसाउने अव’सर दिलाउनेछ। मिहिनेत गर्दा सम्मानित स्थान प्राप्त हुनेछ। समाजमा ता’रिफयोग्य काम गर्दै राम्रो उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) बे’सुरमा काम गर्ने बानीले सम’स्या नि’म्त्याउन सक्छ। समयमा ग’म्भीर नबन्दा दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। कामको चाप बढ्नेछ भने वा’दविवादले मन खिन्न तुल्याउनेछ। गो’पनीयता बाहिरिनाले स’मस्या पर्ला। बा’ध्यात्मक प’रिस्थितिले सताउन सक्छ। अरूका काममा अमूल्य समय ख’र्चनुपर्ला।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य ख’र्चिलो बन्नेछ। अर्थअ’भावले स’ताउन सक्छ। लोकाचारका लागि पनि भोगविलासका वस्तु जु’टाउनुपर्ला। परिवारजन तथा आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउने समय छ। यात्राको प्रक्रियाले ख’र्च बढाउन सक्छ। वा’दविवादले घर-गृहस्थीमा स’मस्या नि’म्त्याउन सक्छ। तापनि, प्रेम र मित्रताको बन्ध’न क’सिलो हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) रो’किएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। भौतिक सा’धन जु’ट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। श’त्रुहरू किनारा लाग्नेछन् र प्रति’स्पर्धामा विजयी भइनेछ। संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। व्यापार तथा अर्थलाभ हुने काममा फाइदा हुनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। मिहिनेतले प्रति’स्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौ’का दिलाउनेछ। व्यापारमा फाइदा र पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीको साथले पनि हिम्मत जगाउनेछ। चिता’एका काम सम्पादन हुनेछन्।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। श्रम परे पनि तारिफयोग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। तर धेरै समर्पणले पनि उपलब्धि गु’म्न सक्छ, स’जग रहनुहोला। बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। रो’किएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। साइनो गाँ’स्नेहरूले अ’प्ठ्यारो पार्न सक्छन्। बेलैमा स’जग नबन्दा व्यवहारमा दुःख पाइनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) कामको उच्च मूल्यांकन हुनेछ भने लगनशीलताले वि’शेष अ’वसर दिलाउनेछ। रोकिएका काम बन्नुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा स’म्झौता गर्ने समय छ। साहसी काम गरेर अरूको मन जित्न सकिनेछ। प्रति’पक्षीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्।